Voadika ny 16 Novambra 2012 23:07 GMT
Niomana hiatrika andro iray hafa hisian'ny zara baomba tsy an-kiato ny mponina ao Gaza, satria mandeha be ny vaovao momba ny mety hisian'ny fananiham-bohitra hataon'ny israeliana.
Ny vaovaon'i Gaza :
Toy ny omaly, ilay Palestiniana biloagera ao Gaza dia nanome fanavaozam-baovao hatrany ho an'ireo mpanaraka tao amin'ny fampahalalam-baovao sosialy, isan'ora.
Isan'ny maty :
Araka ny nambaran'i Joseph Dana, israeliana mpanao gazety, tafakatra ho olona 29, raha kely, ny isan'ireo Palestiniana maty. Mibitsika izy :
Dia inona no manaraka?
Iyad El-Baghdadi miteny hoe :